Imewe - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
Ihe omimi nke oru
Airwoods nwere ihe karịrị afọ 10 nke nnukwu ahụmịhe na ikuku nke esenidụt na ọrụ ụlọ ọrụ injinia dị ọcha, ma nwee ndị ọrụ ọrụ nke nwere ọrụ zuru oke. Dabere na njirimara na ọganihu ọ bụla nke ọrụ ọ bụla, anyị nwere ike ịnye ọrụ nyocha ọtụtụ ọrụ. (tumadi kewara echiche echiche, mbido imewe, zuru ezu imewe na-ewu ihe osise imewe nkebi), na Nye dị iche iche imewe ọrụ maka ndị ahịa (dị ka ize ọrụ na aro, ntụ oyi ngwá nhọrọ imewe, mkpokọta oru ngo imewe, mbụ imewe ịbịaru njikarịcha, wdg .)
1. Design ogbo:
(1) echiche okike: nye ufodu aro na eserese eserese maka ndi ahia n’ime atumatu atumatu oru a, ma nye ha ego ole a gha acho.
(2) mbido imewe: na mmalite-amalite ogbo nke oru ngo, na ahịa nwere mbido atụmatụ Eserese, anyị nwere ike inye mbido HVAC imewe Eserese maka ndị ahịa.
(3) nkọwa zuru ezu: na usoro mmejuputa oru a, ọ na-achọ ịbanye na ọkwa ịzụta, anyị nwere ike inye ndị ahịa nkọwa zuru ezu nke HVAC, na inye ihe ndabere maka nkwekọrịta n'etiti ndị ahịa na anyị, maka ọdịnihu oru ngo.
(4) ihe osise ịse ihe: n'ime ihe owuwu nke ọrụ ahụ, anyị ga-enye eserese HVAC zuru ezu dịka nsonaazụ nyocha saịtị ahụ.
2.Design ọdịnaya ọdịnaya:
(1) ọrụ ndụmọdụ na ndụmọdụ n'efu
(2) na-enye nghazi nghazi ikuku ikuku n'efu, nkwenye na nhazi ikuku nhọrọ ikuku zuru ezu, ma nye nkọwapụta ntụ oyi zuru ezu.
(3) na-enye eserese ọkachamara (gụnyere ịchọ mma, ntụ oyi, ọkụ eletriki na ọzụzụ ndị ọzọ) maka ọrụ mkpocha ikuku na mkpocha ụlọ dị ọcha. Maka ma ị ga-akwụ ụgwọ, ndị otu abụọ kwesịrị ikwurịta okwu. N'ezie, ọnụahịa ahụ dị oke ala ma bụrụ ihe atụ. Ọ bụrụ na ndị otu abụọ binye aka na nkwekọrịta azụmaahịa ụlọ ọrụ dum, akụkụ a nke atụmatụ na ịmekọrịta ndụmọdụ nwere ike iwepụta na nkwekọrịta azụmaahịa zuru ezu.
(4) na-enye ịbịaru njikarịcha ọrụ maka ẹdude nke mbido imewe ịbịaru oru. Maka ma ị ga-akwụ ụgwọ, ndị otu abụọ kwesịrị ikwurịta okwu. N'ezie, ọnụahịa ahụ dị oke ala ma bụrụ ihe atụ. Ọ bụrụ na ndị otu abụọ binye aka na nkwekọrịta nkwekọrịta mkpokọta ọrụ, akụkụ a nke atụmatụ ịmebe atụmatụ nwere ike iwepụta na nkwekọrịta azụmaahịa zuru ezu.